Zinedine Zidane oo ku hadlay War shaki geliyey Jose Mourinho? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Zinedine Zidane oo ku hadlay War shaki geliyey Jose Mourinho?
(10-9-2018) Macalinkii hore ee kooxda Real Madrid ee Zinadine Zidane oo haatan aan haynwax xil tababarenimo ah ayaa dib albaabada ugu furay qorshayasha uu dhawaan ugu soo laabanayo shaqadaas isaga oo rajo weyn galiyay kooxda sida weyn loola xidhiidhinayo ee Manchester United.
Kaliya 102 maalmood ayaa laga joogaa taniyo markii tababaraha ree France uu isaga tagay shaqada kooxda Real Madrid haddana waxa uu durtaba ishaku hayaa siduu uu dhawaan ugu soo laaban lahaa saaxada tababarenimo.
Kaddib inuu wakhti badan oo waayihiisa kubadda cagta ah kusoo bixiyaykooxda Real Madrid isla markaana uu dhammaan waayihiisatababarenimo ilaa haatan ku bixiyay kaliya Real dad badan ayaa ayaashaki galiyay suurogalnimada uu Zizou koox kale ku laylin karo,
“Waa hubaal inaan koox tababari doono wakhti dheer kahor, Taasi waa waxa aan jecelahay waxaanan sidaa sameeyay dhammaan nolosheyda” ayuu u sheegay muuqbaahiyaha TVE xilli uu ka qayb galayay kulan uu ciyaarayay wiilkiisa yar ee Elyaz.
Hadalkan kasoo yeedhay Zidane ayaa ah mid rajo weyn galinaya kooxda Manchester United oo mudooyinkii ugu dambeeyay lala xidhiidhinayay waxaana kor u kac weyn samaynaysa suurogalnimada uu jagada Old Trafford kaga dhaxli karo Jose Mourinho.
Ugu dambayn, Zidane waxa uu mudadii labada sano iyo badhka ahayd ee uu joogay Bernabeu dunida ku tusay heerka ay gaadhsiisan tahay awoodiisa tababarenimo kaddib inuu hantay saddex UEFA Champions League oo xidhiidh ah sidoo kale uu kooxda u keenay horyaalka La Liga.